भर्ने होइन ? जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला – Esewanews
Home / Headline / भर्ने होइन ? जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला
Shivaram Khadka Headline, अर्थ Leaveacomment 5784 Views
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि सर्वसाधारण शेयर (आइपिआ) आइतबार अर्थात आजदेखि बिक्री खुल्ला भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न गरेको हो ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको कुल ३० लाख कित्तामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता संस्थाका कर्मचारी र १ लाख ५० हजार कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि छुटयाइएको छ । बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा बाँडफाँड हुनेछ ।
कम्पनीको आईपीओमा असोज ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ । जसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्था रेहको छ ।ईच्छुक लगानीकर्ताहरुले आस्वा सेवा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७० करोड रुपैयाँ छ । आइपीओ निष्कासन पश्चात चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । शेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईवीएल क्यापिटल रहेको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गर्ने आइपिओ लगानीकर्ताको रोजाइमा र पखाईमा रहेको छ । यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन माग भन्दा धेरै पर्ने भएकोले न्यूनतम १० कित्ता अर्थात एक हजारमात्र लगानी गर्नु पर्दछ ।
११ आश्विन २०७७, आईतवार ०४:३६